AMISOM oo war ka soo saartey dilkii saxafiga Maleysiyan ah ee Muqdisho – SBC
AMISOM oo war ka soo saartey dilkii saxafiga Maleysiyan ah ee Muqdisho
Taliska ciidamada AMISOM ayaa warsaxaafadeed ka soo saarey dhacdadii rasaaseed ee uu ku dhintey Filimqaade u dhashay wadanka Maleysiya isla markaana mid kale uu ku dhaawacmey.
Warsaxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo SBC nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyey ayaa lagu sheegay in AMISOM ay ka murugeysan tahay inay soo gudbiso dhacdo murugo leh oo ka dhacdey magaalada Muqdisho Jimce 2-dii September, taasi oo nasiib daro uu ku geeriyoodey muwaadin u dhashay Maleysiya mid kalena uu ku dhaawacmey.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaa hada socda baaritaan dhameystitan oo ay AMISOM wado kaasi oo sidoo kale iskaashi la leh ciidamada Booliiska dawlada KMG Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusey in marqaatiyaashii hore ee dhacdadan aanay aheyn kuwa cad, balse AMISOM waxay rumeysan tahay in mid ka mid ah ah gaadiidkooda kolonyo ku socdey uu ku lug yeelan karo dhacdadan oo ka dhacay agagaaraha KM4.
orce Commander, Major General Fred Mugisha, said:
“AMISOM waxay qaadanaysaa masuuliyada amaan ee shacabka ku sugan Muqdisho, dhimashadaasina waa mid aad iyo aad looga qoomameeyo, tacsideenu & dareenkeenuna wuxuu la jiraa ehelka ragga dhimashada & dhaawaca uu soo gaarey, waana u tacsiyeynaynaa” ayuu yiri taliyaha ciidamada AMISOM Major General Fred Mugisha .
“Xaqiiqdu hada way cadahay, waana mid ku taxluuqda baaritaankeena deg deg ah, waxaana soo gudbin doonnaa marka uu soo baxo baaritaanku kaasi oo aan horey u bilownay” ayuu sii raaciyey hadalkiisa Major General Fred Mugisha.
“Ka taliyaha ciidamada ahaan, waxaan si shakhsi ah ugala hadley xaaladan Madaxweynaha Soomaaliya waxaana u muujiyey daacadnimada & taageerada aan ka qabo baaritaanka buuxa ee socda, kaasi oo laga qaadan doono talaabada ku haboon askari kasta oo lagu helo in uu lug ku leeyahay askarta lagu helo dambigan” ayuu yiri taliye Major General Fred Mugisha.
“AMISOM waxay jeceshahay inay xaqiijiso dadweynaha inaan halkan u joogno inaan taageerno oo aan ilaalino, waxaa jira ciidamo fara badan oo halkan ka wado shaqo ay ku caawinayaan sidii Muqdisho ay ku heli laheyd nabad buuxda & deganaansho” ayuu hadalkiisa ku soo koobay taliyaha ciidamada AMISOM Major General Fred Mugisha.